Sambo nilentika tao Pakistan Olona 4 maty, 21 tsy hita popoka
Sambo iray niainga tany avaratra andrefan`i Pakistan no natelin`ny rano rehefa nivadika.
Vokany, olona 4 no namoy ny ainy ary 21 no tsy hita popoka omaly maraina, hoy ny tatitry ny AFP (Agence France Presse).  Miisa 38 ireo nandeha tamin`io sambo io saingy 13 izy ireo no avotra soa aman-tsara rehefa nahavita nilomano naka sisin-drenirano. Kely ny finoana hitadiavana ireo sisam-paty tsy hita popoka noho ny andro ratsy any an-toerana. Nitondra mpandeha tao amin`ny reniranon`i Indus ilay sambo ary niharan-doza tao Khyber Pakhtunkhwa. Mbola mitohy ny fizahana ireo razana. Miara-misalahy ny mpitandro filaminana sy ny mpamonjy voina ary ireo mponina manakaiky ilay renirano.